ရိုင်ယန်ဂစ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတဲ့ မန်ယူကွင်းလယ်အသက်သွေးကြောကို ပြောလာတဲ့ ပေါလ်စခိုး – FBV SPORT NEWS
ရိုင်ယန်ဂစ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတဲ့ မန်ယူကွင်းလယ်အသက်သွေးကြောကစားသမားကို ပြောလာတဲ့ ပေါလ်စခိုး
မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ဟာ ယူရိုပါလိဂ် ရီးရဲဆိုစီဒစ်နဲ့ ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ကို ကစားရတော့မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် မန်ယူပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အမျက်ဒေါသကို ပြေစေဖို့ အာရုံအပြည့်စိုက်ဖို့လိုနေပါပြီ …..
အာရုံစိုက်ရတော့ပါမယ်ဆိုမှ အသင်းတွင်း ဗိုင်းရပ်တကောင်နဲ့ အေးဂျင့်တကောင်ကြောင့် ကွင်းလယ်မှာ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်လာတော့မယ်အနေအထားကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိရပါတယ်….
ပေါစခိုးလ်ကတော့ မန်ယူအသင်းအနေဖြင့် ကွင်းလယ်အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်း သူ့ရဲသူငယ်ချင်းဟောင်းကြီး ရိုင်ယန်ဂစ်နဲ့ပိုတူတဲ့ သူတယောက်ကို မန်ယူ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်လို့ပါဘဲ….အဲ့ဒီလူကတော့ ဗန်ဒါဘတ်ပါဘဲ…
ပေါစခိုးလ်က ” ကျနော်တို့ပေါ့ဘာ ထွက်သွားလည်း စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး…..ဆိုးရှားလ်အနေနဲ့ ဒီအချိန်ကို သူကြိုးတွေးထားပြီးဖြစ်မှာပါ….ကစားသမားတယောက်ဟာ ပေးဆပ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင် အသင်းအတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်လာဖို့ဘဲရှိပါတယ်…ထပ်ပြီးပြောမနေတော့ပါဘူး
ကျနော်တို့မှာ အဲ့ဒီနေရာအတွက် ရိုင်ယန်ဂစ်လို ဘောလုံးဖြန့်ဝေမှုကောင်း ပြီး ကွင်းလယ်တခုကို ထိမ်းချုပ်ခါ တိုက်စစ်အတွက် မောင်းနှင်ပေးမယ့် ကစားသမား ရှိနှင့်နေပြီးသားပါ….အဲ့ဒီလူက ဗန်ဒါဘတ်ပါဘဲ…ကျနော်တို့ သူ့ကို အချိန်လေးပေးဖို့လိုတာပါ….
ဒီကစားသမားဟာအသားကျလာတာနဲ့ မန်ယူကွင်းလယ်တခုလုံးကို သူ့ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်ပြီး တိုက်စစ်ထိပါ လိုက်ပါကစားနိုင်မယ့်သူမျိုးပါ…အသင်းကို ရောက်လာတည်းက ကျနော် သူ့အတွက် ရိုင်ယန်ဂစ်နေရာကို စိတ်ထဲကနေ ပေးပြီးသားပါ….ဗန်ဒါဘတ် အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေဖို့ဘဲလိုတာပါဟု ပေါက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်….